GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Russian Sign Language Réunion Creole Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
O nweghị ebe okwu ahụ bụ́ Halowin dị na Baịbụl. Ma, otú Halowin si malite n’oge gboo na ihe ndị a na-eme na ya n’oge a gosiri na ihe mere ndị mmadụ ji eme ya bụ na ha kweere ihe ndị na-abụghị eziokwu banyere ndị nwụrụ anwụ na ndị mmụọ ọjọọ.—Gụọ ihe e dere n’ebe sịrị “Otú Halowin si malite na ihe ndị a na-eme na ya.”
Efe a na-eyi eme Halowin, swiit, nakwa ịga n’ụlọ n’ụlọ ana ndị mmadụ ihe: Otu akwụkwọ a na-akpọ Halowin​—An American Holiday, An American History sịrị na ụfọdụ ndị Kelt na-eyi efe ga-eme ka ha yie otootoo maka na ọ ga-eme ka ndị mmụọ na-akpagharị akpagharị chee na ha bụ ndị mmụọ ibe ha ma hapụ ha. Ndị ọzọ na-edosara ndị mmụọ swiit ha ga-ara ka obi jụrụ ha. N’oge gboo, na Yurop, ndị ụkọchukwu Katọlik bidoro ime ihe ndị ọgọ mmụọ na-eme ma gwa ndị chọọchị ha ka ha yiri efe e ji eme Halowin na-aga n’ụlọ ndị mmadụ na-agwa ha ka ha nye ha onyinye maka ekpere ha na-ekpere ndị nwụrụ anwụ. Ma, Baịbụl akwadoghị ka e tinye ihe ndị a na-eme n’okpukpe ụgha n’ofufe Chineke.​—2 Ndị Kọrịnt 6:​17.
Ndị amusu na ndị nwụrụ anwụ a sịrị na-apụta: Akwụkwọ bụ́ Halowin Trivia kwuru na o teela a ma na e nwere ihe jikọrọ ndị a na ndị mmụọ ọjọọ. Ma, Baịbụl kwuru hoo haa ka anyị guzogide ndị mmụọ ọjọọ, ọ bụghị ka anyị soro ha na-emekọ ihe.​—Ndị Efesọs 6:​12.
Anyụ Halowin: Otu akwụkwọ a na-akpọ Halowin​—From Pagan Ritual to Party Night kwuru na n’oge ochie, na Briten, ndị na-eme Halowin “na-aga n’ụlọ n’ụlọ na-arịọ ndị mmadụ ihe oriri maka ekpere ha na-ekpere ndị nwụrụ anwụ.” Akwụkwọ ahụ kwukwara na ha na-ebu ‘ihe dị ka ayo a ghụchasịrị ime ya tinye ya kandụl a mụnyere amụnye. Kandụl ahụ nọchiri anya mkpụrụ obi e ji eji na pọgatrị.’ Ndị ọzọ kwuru na e ji ihe ahụ dị ka ayo a mụnyere kandụl n’ime ya achụ ndị mmụọ ọjọọ. N’ihe dị ka narị afọ abụọ gara aga, e ji anyụ dochie ihe ahụ dị ka ayo n’ihi na anyụ juru ebe niile, dịkwa mfe ịkọchasị ime ya ma tinye ya anya na imi na ọnụ ka ọ dị ka ihu mmadụ. Ihe mere ndị mmadụ ji eme ihe ndị a bụ maka na ha kweere na mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ, na e nwere ndị na-aga pọgatrị, nakwa na ha kwesịrị ịna-ekpere ndị nwụrụ anwụ ekpere. Ma, ihe ndị a niile esighị na Baịbụl.—Ezikiel 18:4.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ò Nwere Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Otú Halowin Si Bido?
ijwbq isiokwu 67